Fepetra isorohana ny valanaretina: manomana amin’ny hiatrehana ny Covid-19 ny Praiminisitra | NewsMada
Mety hiroso haka fepetra, tsy ho ela ? Notsiahivin’ny Praiminisitra Ntsay Christian tamin’nty teny fampidirany niatrika ireo depiote, omaly teny amin’ny CCI Ivato fa mbola miaina ao anatin’ny krizy ara-pahasalamana ateraky ny valanaretina covid-19 ohatry ny firenena rehetra maneran-tany i Madagasikara.
Voatsiahy tamin’izany ny nidirana amin’ny hamehana ara-pahasalamana ny volana marsa teo. Noraisina ireo fepetra rehetra, mahasoa ny vahoaka. “Nilaina ireny fepetra maro isan-karazany ireny, nahafahantsika nifehy ny fivelaran’izany valanaretina izany. Hitantsika ny vokany fa nihena ny tranga tao anatin’ny volana vitsivitsy”, hoy izy. Natsidiny fa tonga indray ny variant vaovao “Omicron”, mipariaka ao Afrika Atsimo ka nahatonga ny firenena eo anivon’ny Sadc, nanakatona ny sisintany.
Notsindriny fa miezaka mandray ireo fepetra maro ny fanjakana. “Mbola misy ihany ireo tranga vaovao, ka tokony hitandrina sy hanaraka ireo fepetra rehetra ireo ny tsirairay ho fanalefahana ny fivoaran’ny valanaretina eto amintsika”, hoy ihany izy.
Fijerena ny vidin’ny PPN
Na izany aza anefa, tsy maintsy hatrehina ny fampandrosoana. Miandrandra fanatsarana hatrany isika na mikasika ny fiainam-bahoaka izany na ny fomba hahafahana mampandroso ny firenena, araka ny nambarany.
Anisan’izany ny fijerena ireo entana ilaina amin’ny andavanandro (PPN) ka nahafana nanafatra vary sy simenitra hahafahana mandanjalanja ny fiantraikan’ny fikaran’ny vidin’entana eto amin’ny firenena. “Efa manomboka ny fanaparitahana ny vary amin’ny vidiny mirary. Nofoanana tanteraka ny saran’ny fitsaboana any amin’ireo hopitaly maro manerana ny Nosy”, hoy izy.
Nanentana ny vahoaka hisoratra anarana, hijery, ary hanara-maso ny asan’ny Ceni sy ireo rantsamangaika rehetra voakasik’izany ny praiminisitraa amin’izao fotoanan’ny fanavaozana ny lisim-pifidianana, fanao isan-taona izao.